मन थामेर पढ्नुहोस... एक आमाले छोरालाइ लेखेको चिट्ठीले सारालाइ रुवायो, के तपाईंले पढ्नु भो? -
११ बैशाख २०७६, बुधबार १०:०९ April 24, 2019 GS Nepal0Comments
दुई मिनेट लगाएर अवश्य पढ्नुहोला! अनि शेयर गरेर पढ्ने मौका अवश्य दिनु होला! आमा को चिठी पढेर तपाईंको मन रुने छ!!!
मरेँ हुँला, तिम्रो मायालु अनुहार हेर्न नपाएर अनि तिमीलाई मेरो नजरको वरिपरि देख्न नपाएर
बाटो पारी तिमीजस्तै अनुहार देखिरहेकी छु, तिम्रो आगमन महशुस गरिरहेकी छु छोरा । आमा हुँ नि म । मलाई थाहा छ, तिमी दुनियाँको लाजले होइन, मेरै मायाले डोहोर्‍याएर आउँदैछौ । तर मेरो एक मुठी प्राण जानै लाग्यो छोरा । कहीँ कतै मलाई मरेकै देख्यौ भने पनि आँसु नझार्नु है, म मेरो आफ्नै मुटुको टुक्रा रोएको देख्न सक्दिन । बस् मलाई एकपटक आमा मात्र भन्नु, मेरो आत्मले शान्ति पाउनेछ । अर्को जुनीमा भेट्ने आशामा मृत्यु कुरिरहेकी छु ….।आमा पेजबाट साभार
Post Views: 41,959
← मकवानपुरमा सवारी दुर्घटनामा परि ५१ जनाको मृत्यु , मृत्यु हुनेमा ४३ पुरुष ५ महिला र ३ बालबालिका
तेरिया मगरको अहिके सम्मकै बबाल डान्स, यो हेर्नुस् भिडियो →
बाख्री सिङ्गारेर टिक टक भिडियो , रोचक भिडियो हेर्नुहोस
२२ फाल्गुन २०७५, बुधबार ११:१४ GS Nepal 0
जहाज भित्रै पाइलटको कुटाकुट, चार घन्टा सम्म यात्रु प्लेन भित्रै अलपत्र।
११ माघ २०७५, शुक्रबार २३:१२ GS Nepal 0
विवाहित महिला र १९ बर्षे युवकको नाईट बसको कथा.. जनचेतनाको लागि सक्दो सेयर गरौं
२६ फाल्गुन २०७५, आईतवार २०:३७ GS Nepal 0